Tsamba Yechipiri yaPetro 2:1-22
“Pachava nevadzidzisi venhema” (1-3)
Vadzidzisi venhema vachatotongwa (4-10a)
Kukandwa kwengirozi muTatarosi (4)
Mafashamo; Sodhomu neGomora (5-7)
Zvinoitwa nevadzidzisi venhema (10b-22)
2 Zvisinei, pakati penyu pachava nevadzidzisi venhema sezvapakavawo nevaprofita venhema pakati pevanhu.+ Vanhu ava vachamutsa tumapoka tunoparadza vachizviita chinyararire uye vachatoramba tenzi akavatenga,+ zvoita kuti vakurumidze kuparadzwa. 2 Uyewo vazhinji vachatevera tsika dzavo dzakafumuka,*+ uye maitiro avo achashoresa nzira yechokwadi.+ 3 Uyewo vachakunyengerai nemashoko enhema nemhaka yemakaro avo, kuti vawane zvavanoda. Asi mutongo wavo uyo wakapiwa kare kare,+ hausi kunonoka kusvika, uye kuparadzwa kwavo kuchatouya chete.+ 4 Chokwadi Mwari haana kurega kuranga ngirozi dzakatadza,+ asi, akadzikanda muTatarosi,*+ akadzisunga necheni dzerima* guru kuti dzichengeterwe kutongwa.+ 5 Haanawo kurega kuranga nyika yekare,+ asi akachengeta Noa muparidzi wekururama+ ari mupenyu, nevamwe vanomwe,+ paakaunza mafashamo panyika yevanhu vakanga vasingadi Mwari.+ 6 Uye paakaita kuti maguta eSodhomu neGomora ave madota, akaapa mhosva,+ achiratidza zvichaitika kuvanhu vasingadi Mwari.+ 7 Uye akanunura Roti uyo aiva akarurama+ uye aishungurudzika chaizvo netsika dzakafumuka dzevanhu* vakanga vasingateereri mutemo, 8 nekuti paaigara pakati pavo, mweya* wemurume akarurama iyeye wairwadziwa zuva nezuva nezvinhu zvaaiona uye zvaainzwa, zvaiitwa nevanhu vasingateereri mutemo. 9 Saka Jehovha* anoziva nzira yekununura nayo mumuedzo vanhu vakazvipira kwaari,+ asi achava nechokwadi chekuti vanhu vasina kururama vaparadzwa pazuva rekutongwa,+ 10 kunyanya vaya vanoda kusvibisa miviri yevamwe+ uye vanozvidza vane simba.*+ Havatombotyi uye havateereri zvinotaurwa nevamwe saka havazezi kushora vaya vanokudzwa, 11 asi ngirozi, kunyange zvazvo dzakasimba kwazvo uye dziine simba kuvapfuura, hadzivapomeri dzichivatuka, nekuti dzinoremekedza Jehovha.*+ 12 Asi vanhu ivava, avo vanoita semhuka dzisingafungi dzinongoita zvinhu semasikirwo adzakaitwa uye dzinongoberekerwa kubatwa uye kuparadzwa, vanotaura mashoko ekuzvidza pamusoro pezvinhu zvavasingazivi.+ Vachaparadzwa nemhaka yemaitiro avo akaipa; 13 vachawana mubayiro wekurwadziswa nemhaka yezvakaipa zvavanoita. Vanonakidzwa nekurarama upenyu hweumbozha vachifadza nyama yavo+ kunyange masikati machena. Vanhu ava vakaita semavara nemakwapa, uye vanonakidzwa chaizvo nekusimudzira dzidziso dzavo dzinonyengera pavanenge vachidya nemi.+ 14 Maziso avo azere neupombwe+ uye havakwanisi kurega chivi, uye vanonyengera vaya vasina kusimba.* Vane mwoyo yakadzidziswa kukara. Ivo vana vakatukwa. 15 Vakasiya nzira yakarurama vakabva vatsauswa. Vakatevera nzira yaBharami,+ mwanakomana waBheori, uyo akada mubayiro wekuita zvakaipa,+ 16 akatsiurirwa kuita zvisina kururama.+ Mhuka isingatauri inotakuriswa zvinhu yakataura naye nenzwi remunhu ikaita kuti muprofita wacho asaita zvinhu zveupengo zvaaida kuita.+ 17 Vanhu ava zvitubu zvisina mvura uye imhute inotakurwa nedutu rine simba, uye vakachengeterwa rima gobvu.+ 18 Vanotaura zvinhu zvinofadza nzeve asi zvisina zvazvinobatsira. Vanoshandisa zvido zvenyama+ uye zvinhu zvakafumuka* kuti vanyengere vanhu vanenge vachangopukunyuka vachibva pane vaya vanoraramira kuita zvakaipa.+ 19 Vanovavimbisa rusununguko, asi ivo pachavo vari varanda vekuora;+ nekuti kana munhu akakundwa nemumwe munhu, anenge ari muranda wake.*+ 20 Kana vakatangazve kuita zvinhu zvinosvibisa zvenyika+ zvavakanga vambosiya vachibatsirwa neruzivo rwakarurama pamusoro paShe uye Muponesi Jesu Kristu, vokurirwa nazvo, chokwadi vanenge vaipa kupfuura zvavaiva pakutanga.+ 21 Zvaizova nani kudai vakanga vasina kuwana ruzivo rwakarurama pamusoro penzira yekururama pane kuti vawane ruzivo rwacho vozotsauka pamurayiro mutsvene wavakapiwa.+ 22 Zvakaitika kwavari zvinozadzisa chirevo chechokwadi chinoti: “Imbwa yadzokera kumarutsi ayo, uye nguruve yakanga yashambidzwa yadzokera kunoumburuka mumatope.”+
^ Kana kuti “maitiro avo ekushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akadziisa mumakomba erima.”
^ Kana kuti “nekushaya nyadzi kwevanhu.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
^ Kana kuti “vanozvidza ushe.”
^ Kana kuti “mweya isina kusimba.”
^ Kana kuti “akakundwa nechimwe chinhu, anenge ari muranda wechinhu chacho.”